Mogadishu Journal » Pro Cali Max’ed Geedi oo siweyn u soo dhaweeyay hishiiskii dowladda iyo maamulka Jubba ee Addis Ababa
Mjournal : — Ra’iisal wasaarihii hore ee xukuumadii ku-meel-gaarka aheyd ee Soomaaliya Pro Cali Max’ed Geedi ayaa siweyn u soo dhaweeyay hishiiskii dhawaan dowladda federaalka iyo maamulka Jubba ay ku gaareen magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya, kaa oo soo afjaray khilaaf mudo dheer soo taagnaa.
Pro Geedi ayaa sheegay in hishiiska labada dhinac hordhac wanaagsan u yahayy dhaqan-gelinta nidaamka federaalka ah, dastuurka iyo nabad ku wada noolaashaha ummadda, isaga oo uga mahad celiyay ergada labada dhinac isku tanaasulka ay sameeyeen.
Pro Cali Max’ed Geedi ayaa todobaadyadii ugu danbeeyay siweyn u eedeeynayaya dowladda federaalka Soomaaliya siyaasadeeda arrimaha gudaha, gaar ahaan sida ay mas’uuliyiinta dowladda u wajahayaan dhismaha maamulka Jubbaland, isaga oo sheegay in dowladda ku fashilantay siyaasada Jubbooyinka, hasse ahaatee hishiiska la gaaray ayuu sheegay in uu yahay mid wax weyn ka tari doona siyaasada dib-u-hishiisiinta.
Mas’uuliyiinta dowladda ayuu u jeediyay in ay ka shaqeeyaan sidii ay xiriir wanaagsan ula yeelan lahaayeen maamulada dalka ka jira, wuxuuna guubaabiyay in laga baxo khilaafaadka siyaasadeed ee colaadaha horseedi kara.
Hishiiskii Arbacadii aynu soo dhaafnay lagu gaaray magaalada Addis Ababa ayaa siyaabo kala duwan looga jawaabay, waxaana xusid mudan marka laga soo tago siyaasiyiinta soo dhaweysay in ay jiraan siyaasiyiin iyo xildhibaanno ka horyimid hishiiska.